Cumar Cabdirashiid: Xaaladda kacsan ee Muqdisho cawaaqib xumo ayey keeni doontaa - Bulsho News
Ururada Bulshada Rayidka Oo Qaadacay Talaabadii Muddo Kororsiga Ee Golaha...
Cumar Cabdirashiid: Xaaladda kacsan ee Muqdisho cawaaqib xumo ayey keeni doontaa
Raysalwasarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabsdirashiid Sharmaarke ayaa sheegay in xaaladda kacsan ee Muqdisho ka jirta ee ka dhalatey muddo kororsiga aan sharciga ahayn ay keeni karto oo keliya cawaaqib xumo.
Istaraatiijiyadda ku dhisan carqaladeynta dhacdooyinka muhiimka ah oo haddana qof kasta oo kale loogu eedeynayo natiijo xumida ayaa banaanka is keentay. Sii Kordhinta xaaladda kacsan ee kajirta Muqdisho iyo meelo kaleba waxay hubaal ahaan u horseedi doontaa cawaaqib xumo.
Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in xalka keliya ee arrimahan looga bixi karaa yahay in wada hadalkii dib loogu laabto dalkana doorasho laga qabto.
AMISOM oo loo kordhiyay Mudada howlgalkooda Soomaaliya
Puntland: ” Waxay bogaadinaysaa hogaaminta dalka ee Raysalwasaare...
Ruud Gullit Oo Doortay Xiddiga U Qalma Ku...
Madaxweyne farmaajo oo fadeexadii ugu xumayd dhex fadhiya...
PDRC: Baaqa Urur Siyaasadeedyada waxa ay dhaawacaysaa kalsoonidii...